Amina Yuguda oo heshay abaalmarinta Komla - BBC News Somali
Amina Yuguda waa gabadha ku guulaysatay abaalmarinta 3aad ee sannadlaha ah ee Komla Dumor
Wariye u dhalatay dalka Nigeria oo ka soo jeedda waqooyiga bari ee dalkaas ayaa sannadkan ku guulaysatay abaalmarinta 3aad ee sannadlaha ah ee Komla Dumor ee ay bixiso BBC world news.
Amina Yuguda waa weriye ka tirsan Telefishan maxali ah oo la yidhaa Gotel TV, halkaas oo ay ku soo bandhigtay warar waaweyn oo ay ka midyihiin warbixino ay ka diyaariyey kacdoonka Boko Xaraam.
Waxay sidoo kale bilaabi doontaa tabobarro muddo saddex bilood ah oo bilaabmi doona bishan September oo ay ku qaadan dooonto xarunta BBC ee London.
Abaal marintan waxa loogu talo galay in lagu xuso Komla Dumor oo ahaan weriye ka tirsan BBC World News oo si kedis ah u geeriyooday sannadkii 2014-kii isaga oo 41 jir ah. Marwo Yuguda waxay sheegtay in guushaa ay gaadhay "sharaf weyn" u tahay.
"Farxad baa i saaqday, dadka wararka tebiyaa door muhiim ah ayey Afrika ka ciyaaraan…waana waxa na lagu yaqaan. Warfidiyeenkuna maanta masuuliyadoodii way ka soo baxayaan" ayey tidhi.
Amina Yuguda, Gudida garsoorka ee kala saarayey tartamayaasha ayaa ka helay heelanaanteeda
Gudidii garsoorka ee kala saarayey tartamayaasha ayaa ka helay heelanaanta ay u qabtay in Raadyowgu yahay meel muhiim ah oo dadka xoolo dhaqadada ah wararka loogu tabiyo, waxaanay codsigeedii tartanka ku sheegtay in:
"In kasta oo aanay wax barasho badan lahayn, hadana dadka dalkaygu waxay aragtiyo kala duwan ka qabaan oo ay xog ka heleen arimaha ay ka midka yihiin madaxtinimada Trump ee Maraykanka, keni adayga Kuuriyada Woqooyi, siyaasadda arimaha dibadda Ruushka ee Putin iyo arimo kale oo badan".
Agaasimaha guud ee BBC World Service Group, Francesca Unsworth, ayaa sheegtay in marwo Yuguda u qalanto guushaa, waxaanay tidhi " in aanu aragno qof leh in badan oo xirfadii Komla oo kale ah waa wax lagu faano aad baanan ugu faraxsannahay in Amina nala shaqayso"
Suxufiyiintii hore ugu guulaystay Abaal Marinta Komla Dumor waxay kala yihiin Nancy Kacungira oo ah wariye reer Uganda ah iyo Didi Akinyelure oo ah weriye wax ka qorta ganacsiga oo reer Nigeria ah.